पिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या छ ? के भन्छन् मुत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर पशुपति भट्ट - Birgunj Sanjalपिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या छ ? के भन्छन् मुत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर पशुपति भट्ट - Birgunj Sanjalपिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या छ ? के भन्छन् मुत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर पशुपति भट्ट - Birgunj Sanjal
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०७:०२
वीरगन्ज । गर्मी याममा धेरैले भोगेका हुनसक्छन्, पिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या । केटा होस् वा केटी दुबैमा यस्तो समस्या हुन्छ ।तर किन हुन्छ एस्तो ? यस्बाट बाच्न केगर्नु पर्छ ? केभन छन वीरगन्ज मेट्रो सिटिका मुत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर पशुपति भट्ट “वास्तवमा यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । किनभने पिसाबको माध्यामबाट शरीरको बिशाक्त पदार्थ बाहिर निस्कने हो । त्यसैले मुत्राशयसँग जोडिएको रोगबारे सर्तक हुनैपर्छ ।
गर्मीमा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा पिसाब पोल्न सक्छ । तर, यो एकमात्र कारण भने होइन । पिसाब पोल्नु, पिसाब गर्दा पीडा हुनु जस्ता समस्याले अन्य रोगको पनि संकेत गर्छ । मुत्रनलीको संक्रमण लगायतका थुप्रै कारण हुनसक्छ, पिसाब पोल्ने र पीडा हुने ।पिसाब पोल्ने कारण
वीरगन्ज मेट्रो सिटिका मुत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर पशुपति भट्ट अनुसार यस्तो छ घरेलु उपचार
– पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुहोस् । संभव भएसम्म हरेक एक घण्टामा पानी पिउनुहोस् । यसले मुत्राशयमा रहेको हानिकारक व्याक्टेरिया पिसाबको माध्यामबाट बाहिर निस्कन्छ ।
– कहिले कहिं मनतातो पानी पिउँदा पनि पिसाबको पीडा कम हुन्छ ।
– यस्तो फल एवं सब्जीको सेवन गर्नुहोस्, जसमा साइटृक एसिड अधिक हुन्छ । यसले युरिन इन्फेक्सन गराउने ब्याक्टेरिया नष्ट हुन्छ ।
यास्ता उपाय बाबजुद कुनै समस्य देखियो भने वीरगन्ज मेट्रो सिटिका मुत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर पशुपति भट्ट सङ्ग सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । यस्तो समस्या लाई हेर्चेकराइ नगरी समयमै उपचार गराइ ठुलो रोग लाग्न बाट बचौँ ।